Caqiidadayada - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Waxaan aaminsan nahay dadaal midaysan oo lagu fulinayo Himilada Kulliyadaha Hore ee Colorado.
Waxaan aaminsan nahay in la ixtiraamo oo la ixtiraamo sharafta dadka oo dhan iyo in dadka loo arko shakhsi ahaan. Dadku waxay leeyihiin qiimo iyo ujeedo ku dhex jira sababtoo ah waxay dhasheen. Waxaan falsafad ahaan aaminsanahay in dhammaan shakhsiyaadka la siiyay karti, karti iyo karti u gaar ah naftooda taas oo marka la horumariyo u horseedda awood u adeegi karta inta noloshooda ka hartay.
"Jawaabtu waa in aan ka sii qoto dheeraa jinsiyadda, ka qoto dheeraanta hantida, ka sii qoto dheer aqoonsiga qowmiyadeed, ka sii qoto dheer jinsiga. Inuu wax baro nafteena in la fahmo qof kasta, ma aha sida calaamad koox, laakiin sida shakhsi gaar ah oo gaar ah oo ku dhex jira macnaha guud ee aadanaha la wadaago. Si aan u aadno meeshaas aasaasiga ah ee aan dhammaanteen nahay makhluuqaad dhimanaya, oo raadinaya in la abuuro nidaam, qurux, qoys, iyo isku xirnaanta adduunka taas oo keligiis u muuqata in ay marar badan u laabato xagga randomity iyo entropy."
Qeexitaanka CEC ee DEI:
Kala duwanaanta: In la ixtiraamo sharafta dadkeena kala duwan.
Equity: Xaqiijinta in si cadaalad ah loola dhaqmo, sinaanta fursada lagu kasbado shahaado-wadaag ama shahaado, iyo cadaalad helida taageero shaqsi si loo kasbado shahaadada associate ama shahaado.
Inclusion: Dhisidda dhaqanka wax-wada-lahaanshiyaha iyadoo la xurmeynayo lana ixtiraamayo dadka oo dhan.
Waxaan aaminsan nahay in ardaydu ay yihiin mas'uuliyadda koowaad. Diyaarinta iyo ilaalinta boosaska ay ardaydu ku horumari karaan waxbarashada waxay sii wadi doontaa inay u baahan tahay fikir iyo dib u fakar. Fasalku maaha meel ardayda lagu baro caqiidada shakhsi ahaaneed ama fikradaha macalinka. Si kastaba ha ahaatee, fasalku waa meel lagu kobciyo fikirka muhiimka ah, sahaminta mabaadi'da ku xeeran nuxurka adag, xalinta mashaakilaadka, iyo xoriyada fikirka ardayda ee macalimiin xirfadaysan oo aan eex lahayn. Diirada waxbarashadu waxay had iyo jeer ku sii jiri doontaa helitaanka ardaygu hamiday xirfadda ay doorteen iyagoo horumarinaya dabeecad iyo maskax korriin. Waxaanu ku daydaa oo aanu qiimaynaa baridda awoodaha dabeecadaha sida naxariista, xilkasnimada, anshaxa shaqada, iyo adkaysiga kuwaas oo lama huraan u ah guusha mustaqbalka ardayga ee dhammaan qaybaha nolosha.
Waxaan aaminsan nahay doorashada waalidka iyo inaan halkaan u joogno inaan u adeegno qoysaska. Markaan ku dadaaleyno inaan ku dhisno xiriirka qoysaskeena, waxaan u dhaafnaa shaqada waalidnimada waalidiinteena. Waxay mas'uul ka yihiin inay bixiyaan qiyamka suuban ee lagu barto guryahooda, oo ay ku jiraan fikradaha siyaasadeed, diimeed, iyo bulsho ee ku dhaqma. Waxaan ku kalsoonahay inay garanayaan waxa u roon ardaygooda marka uu ardaygu korayo oo uu u korayo qof weyn.
Waxaan aaminsan nahay dareenka lahaanshaha, iyo is-hoosaysiinta dhaqanka iyo xiisaha. Waanu fahansanahay muhiimada, soo dhawaynayna taariikhda, waxaanan qiimaynaa wax ku biirinta kooxaha qawmiyadaha ee ka muuqda dugsiyadeena. CEC waxay taageertaa naadiyada xoojiya manhajka tacliinta ee fasallada mana taageeraan naadiyada ku salaysan siyaasadda, diinta, ama arrimaha bulshada taasoo keeni karta kala qaybsanaanta dhaqanka dugsigeenna. Waa rajadayada inaan ka faa'iidaysano awooda sharafta si ardaydeena iyo shaqaalaheenu ay u noqdaan kuwa ugu awooda badan, bini'aadamka naxariista leh ee ay noqon karaan. Bulshada CEC waxay horumari doontaa markay dareemaan in si wanaagsan loola dhaqmay oo la qiimeeyo.